शरीरमा पानीको कमी हुन नदिन के गर्ने ?
काठमाडौं - जाडो याममा कतिपयले कम पानी पिउने गर्छन् । शरीरलाई पानी पुगेन भने विभिन्न स्वस्थ्य समस्याले सताउन सक्छन् । केही खाने कुरा खाएमा तिनले शरीरमा पानीको कमी हुँन दिदैन । – स्याउस्याउमा करीब ९० प्रतिशत पानी हुन्छ । जाडो याममा शरीरलाई पानी प् ...
टुसाएका गेडागुडीका खानुका यस्ता फाइदाबारे
काठमाडौं - विभिन्न प्रकारका दाल, सिमी, चना, केराउ, राजमा, भटमास, मेथीलगायत गेडागुडीलाई मिसाएर तरकारीका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसमा अत्यधिक मात्रामा प्रोटिन र फाइबर पाइन्छ । टुसा उमारेका गेडागुडीलाई पकाउँदा अझै उत्तम हुन्छ । – गेडागुडीमा अत्यधिक प ...
नुहाउनु अघि कपालमा तेल लगाउँदा हुन्छ यस्तो कमाल
काठमाडौं - राम्रो कपालले मानिसलाई आकर्षक बनाउन सहयोग गर्छ । तर पछिल्लो समय मानिस कपाल झर्ने समस्याका कारण विभिन्न खालको औषधि गर्न बाध्य बनिरहेका छन् ।कपाल झरि तालु नै देखिने भएपछि यसको रोकथामको लागि उपाय अपनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि केही घरेलु उपायहरु ...
स्वस्थ्य रहन खानुहोस् दैनिक एउटा स्याउ
काठमाडौं - नियमित स्याउ खाँदा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने पैस्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ । यो हरेक मौसममा सजिलै उपलब्ध हुने स्वादिष्ट फल हो । खासगरी, ब्रेकफास्टमा स्याउ समावेश गर्नु राम्रो मानिन्छ । -स्याउमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर, क्याल्सियम र एन्ट ...
यस्ता छन् गाजरका ६ फाइदा
काठमाडौं - गाजर स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै फाइदाजनक छ । गर्मीमा सलादको रुपमा गाजरको प्रयोग गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । सय ग्राम गाजरमा ८० ग्राम पानी, ४.७ ग्राम ग्लुकोज, २.८ ग्राम रेसा, ०.९ ग्राम प्रोटीन, ०.३ बोसो त्यस्तै भिटामिन के पनि पाइन्छ । गाजरको सेव ...
यी हुन् अम्बा खानुका फाइदा
१. अम्बामा भिटामिन ए,बी तथा सी पाइन्छ । अपच, ग्यास्टिक आदिका लागि अम्बा निकै लाभदायी मानिन्छ । यी रोगबाट पीडित व्यक्तिले प्रतिदिन २५० ग्राम अम्बाको सेवन गर्नु आवश्यक पर्दछ ।२. अम्बा केवल स्वादका लागि मात्रै प्रयोग नभई यसको सेवनले शरीरमा रोग प्रतिरोधा ...